IJifflenow: Indlela le ntlanganiso yokuZenzekelayo yeQonga eliChaphazela ngayo uMsitho we-ROI | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 7, 2019 NgoMvulo, Meyi 6, 2019 URavi Chalaka
Uninzi lwamashishini amakhulu enza utyalomali olukhulu kwiminyhadala yeenkampani, kwiinkomfa, kunye nakwiziko lokwazisa ngolindelo lokukhawulezisa ukukhula kwamashishini. Kule minyaka idlulileyo, ishishini leziganeko lizamile iimodeli ezahlukeneyo kunye neendlela zokubonisa ixabiso kwezi nkcitho. Olona khokelo lukhokelweyo luvelisiwe, ukubonwa kweendaba zosasazo lwasentlalweni, kunye nophando lwabazimeleyo ukuqonda ifuthe leziganeko kulwazi lwebranti. Nangona kunjalo, iintlanganiso yinxalenye ebalulekileyo yokwenza ishishini. Ukuze uphumelele, amashishini kufuneka aqhube iintlanganiso ze-B2B ngobuqu. Ngapha koko, uphononongo lubonisa oko Abaphathi abalishumi kwabalishumi bakhetha iintlanganiso zobuquiintlanganiso ezibonakalayo. Ngoba? Intlanganiso yobuso ngobuso idala ukuthembana, izigqibo zeshishini ngexesha elifanelekileyo kunye nokukhuthaza ukucinga okuntsokothileyo okuvula ucango kwizivumelwano zeshishini kunye nokwanda kwengeniso.
Iminyhadala efana nemiboniso yorhwebo kunye nokutyelelwa kwamaziko kundwendwela kunika ithuba kwezi ntlanganiso ze-B2B zenzeke. Nangona kunjalo, ukucwangcisa ezi ntlanganiso kuhlala kuluxanduva kuwo onke amaqela abandakanyekayo. Ukongeza, abathengisi beminyhadala bahlala bezabalaza ukubonisa ixabiso kwezi ntlanganiso kunye nendlela abanempembelelo ngayo kwimibhobho yokuthengisa kunye nengeniso. Ngokophando lwakutsha nje, Iipesenti ezingama-73 ze-CEO zicinga ukuba abathengisi abanakho ukuthembeka kushishino. Ngokuthengisa kuhlala kuqhutywa ziindleko, abathengisi beminyhadala bajongene nomceli mngeni omkhulu wokubonisa imbuyekezo kutyalo mali ukugcina okanye ukwandisa isabelo sabo kuhlahlo-lwabiwo mali.
Abacwangcisi bemisitho balawula iminyhadala emininzi nangaliphi na ixesha bephatha iishedyuli ezininzi, bejongana nokubuyela emva nangaphandle ii-imeyile kwaye amaxesha ngamaxesha besebenzisa ispredishithi ukufaka ngesandla lonke olu lwazi. Ukubonisa ixabiso kuwo wonke umsebenzi onzima abathengisi abawenzayo kwimisitho, kufuneka bafumane izixhobo ezibanceda ukuba baququzelele, bahlalutye idatha kwaye babonise i-ROI yomnyhadala ngamnye.
Ravi Chalaka, CMO kwi Jifflenow
Ukuhambela kude kulawulo olusekwe kwispredishithi
A Iintlanganiso zeQonga lokuZenzekelayo(MAP) ludidi lwesoftware ezenzekelayo ukuhamba komsebenzi okunxulunyaniswa nokucwangciswa kwangaphambi kwentlanganiso, ulawulo lwentlanganiso kunye nohlalutyo lwasemva komhlangano kunye nokulandela. Ukusebenzisa i-MAP kwandisa amathuba amashishini okunyusa inani kunye nomgangatho weentlanganiso ezicwangcisiweyo. Isebenza ngakumbi kumashishini ekufuneka elawule imihlangano ephezulu yeqonga kwimisitho, amaziko okwazisa, imiboniso yendlela, iintlanganiso zentengiso kunye neeforamu zoqeqesho.
Thelekisa oku kunye nokusetyenziswa kolawulo lwentlanganiso yecebo elisekwe kwispredishithi. Xa abathengisi basebenzisa amaspredishithi ukuphatha iintlanganiso zabo zobuchule, iingxaki ezininzi ziyavela kubathengisi nakubathathi-nxaxheba bezi ntlanganiso.
Ukudibana Ukucwangcisa intlanganiso kubandakanya abathathi-nxaxheba abaninzi. Rhoqo amaxesha, iimeko ziyatshintsha kunye nohlaziyo kufuneka lubonelelwe kwindibano yabathathi-nxaxheba ukugcina wonke umntu ekwiphepha elinye. Nangona kunjalo, xa usebenzisa ispredishithi, abathengisi balahlekelwa ngumbono wokuba ngubani ohlaziya ispredishithi okanye ukuba bonke abathathi-nxaxheba basebenzisa ispredishithi esifanayo okanye esifanelekileyo.
Inkqubo yokulungisa impazamo
-Njengabantu, asigqibelelanga ukuba sinomdla wokwenza iimpazamo. Kukwanjalo xa ufaka idatha kwispredishithi. Ezi mpazamo zinokubangela iinkampani izigidi zeedola.
Izimemo zentlanganiso Ngelixa iikhalenda kunye nezipredishithi singesiso esona sixhobo silungileyo sokucwangcisa iintlanganiso zesicwangciso-qhinga, zibonelela ngenkonzo ekubambeni amachibi amakhulu edatha emileyo kunye nokwenza izibalo. Ngelishwa, abaxhotyiswanga ukwenza enye into njengokulawula nokugcina umkhondo weentlanganiso ezicwangcisiweyo okanye ukwenza utshintsho kwiinkcukacha zentlanganiso.
Unxibelelaniso Ulawulo lomsitho sisiqwenga esinye sepayi xa kufikwa kwinkqubo yokuthengisa iyonke. Abathengisi bahlala belawula izixhobo ezininzi ngaxeshanye ukulandelela ukubhaliswa kwemisitho yokurekhoda, ukufaka idatha kwiiskrini ze-badge, ukulandelela ukungena kwintlanganiso, ukufikelela kunye nokufaka idatha ukuya nokubuya kwiCRM nokunye. Iinkqubo ezisekwe kwispredishithi zenza le nkqubo ibe ngumceli mngeni ngakumbi njengoko zihlala zingakwazi ukudibanisa nala maqonga ukwenza amava angenamthungo.
Iimpawu kunye nokuqonda - Iziganeko, imiboniso yorhwebo kunye namaziko okwazisa abonelela abathengisi ngolwazi oluninzi. I-metric ezinje ngenani lezimemo zeentlanganiso ezamkelweyo, ubungakanani besivumelwano, inani leentlanganiso ngesivumelwano esivaliweyo, njl., Ziluncedo kakhulu xa kuvavanywa impumelelo yemikhankaso kunye nokuseka i-ROI.
Izipredishithi azonelanga kwihlabathi lanamhlanje ukulawula umthamo omkhulu weentlanganiso ezicwangcisiweyo.
Isakhono sokuzenzekelayo ukucwangciswa, ukulawulwa kunye nohlalutyo lweentlanganiso ezicwangcisiweyo zonyusa inani lokunxibelelana ngama-40% ukuya kuma-200% ngokusekwe kwindlela abathengi abafaneleke ngayo ukuba basebenzise obu buchwephesha. Iinkampani ezininzi zeFortune 1000 ziye zafumanisa ukuba ukusebenzisa iPlatform yokuZenzekelayo yeNtlanganiso (MAP) sisisombululo esineendleko eziphezulu esivelisa imbuyekezo ekhawulezileyo kwiziganeko ezibini zokuqala kunye nakwiinyanga zokuqala zokusetyenziswa kumaziko okwazisa.
Ukulawula iintlanganiso kunye nokuvala ukujongana neJifflenow
IJifflenow yenzelwe ukubonelela abathengisi ngesisombululo sokucwangcisa iintlanganiso ze-B2B, ucwangciso, ulawulo kunye nohlalutyo. Ngeqonga layo, abasebenzisi banokufikelela kwiimveliso ezimbini kubandakanya iintlanganiso zeJifflenow zeMisitho kunye neJifflenow Briefing Centre enefuthe kuwo omathathu amacandelo eentlanganiso zobuchule: ukuhamba kwangaphambi kokuhlangana, ukuhlangana kunye nokuhlangana emva komhlangano.
Ngexesha lesigaba sangaphambi kwentlanganiso, ukucwangciswa nokucwangciswa kuyenzeka. Oku kubandakanya ukuthumela izimemo, ukubhukisha igumbi kunye nokulungelelanisa iikhalenda. Zininzi izinto zokuphatha eziza kulawulwa, kodwa kubalulekile ukuba ungalibali ukuchaza iinjongo zale ntlanganiso. Ngexesha lesigaba sokuhlangana, ulawulo lwenzeka, ukujonga abazimaseyo, ukulawula konke okufunekayo, ukubeka esweni ubukho bezixhobo kunye nokulandelela inkqubela yentlanganiso. Okokugqibela, emva kokuba intlanganiso iphelile, uhlalutyo lunokwenzeka. Kweli nqanaba, kubalulekile ukulinganisa, ukuhlalutya iimetrikhi kunye nokuqikelela ifuthe lerhafu. Zonke ezi zinto zibalulekile ekufezekiseni iziphumo zokwenyani zeshishini kwiintlanganiso ze-B2B ezicwangcisiweyo.
"Abarhwebi akusafuneki bathembele kwinkqubo yolawulo olusekwe kwispredishithi engaxhunyiwe kwi-intanethi, ngesandla, enempazamo, engakhuselekanga kwaye engenakoyiseka," utshilo uHari Shetty, u-CEO eJifflenow. "NgeNtlanganiso yokuZenzekelayo yeNtlanganiso kaJifflenow, solula isandla sinceda abathengisi ukwenza lula umsebenzi wokulawula iintlanganiso ukuze bakwazi ukugxila kwezinye izinto zomsebenzi wabo ngelixa beqinisekisa ukuba zonke iintlanganiso zinamava angenamthungo kumthengi ngamnye."
Impumelelo yoMthengi noJifflenow
Omnye wabathengi bakaJifflenow ubandakanya inkampani yezixhobo zonxibelelwano ezimanyelwayo ezimanyeneyo. Ngeli nqaku, siza kubhekisa kule nkampani njenge Umsindo. Isandi sisetyenziswa kwihlabathi liphela ngoochwephesha banamhlanje, abaqhubi beenqwelo moya, iiarhente zeziko lokufowuna, abathandi bomculo kunye nabadlala umdlalo. Ukuba yinkampani yehlabathi, iqela elilalelwayo lijamelene nemiceli mngeni emininzi kubandakanya:
Ukubhukisha kunye nokuququzelela iintlanganiso kumaziko abo enkcazo kwihlabathi liphela
Ubunzima ekufumaneni abaphathi kunye nentengiso yokuthenga ngaphakathi kwinkqubo
Ngokusebenzisa iZiko leNkcazo leJifflenow, iqela leziko lokunika ingxelo elifunyenweyo lifumene ixesha ngokunciphisa iinzame ezichithwe kuthunyelwa ii-imeyile ukubuyela-nokubuya ekulawuleni izicelo, ukukhetha ababonisi kunye nokufumana iinkcukacha zentlanganiso kunye nokuqinisekiswa. Ukongeza, iqela lokuthengisa elihlanganisiweyo ngoku liyakwazi ukuhambisa iincoko eziqhutywa ngumxholo ezinikezela ngamava wabathengi abenzelwe wena. Ngotshintsho olunikezwe yiJifflenow's Intlanganiso yokuZenzekelayo yeNtlanganiso, le nkqubo inyuse ukuthatha inxaxheba kunye nenkxaso evela kwizigqeba ezilawulayo kunye namaqela okuthengisa.
Ibikukuphefumla komoya omtsha. Ndikwazile ukuthatha inyathelo ukubuyela umva kwaye ndigxile kwizinto ezifanelekileyo ukuba ziqwalaselwe ndim.
Umphathi oMkhulu kwiAudio
Cela iDemo yeJifflenow [/ ikhonkco]
Iinkampani ezifuna ukulawula ngempumelelo iintlanganiso zomnyhadala, zibonelela abathengi ngamava angenamthungo kwaye zenze ingeniso kufuneka ziqwalasele ukusebenzisa iQonga lokuZenzekelayo leNtlanganiso yeJifflenow, ukuthintela umngcipheko kunye neendleko zamathuba ezivela kulawulo olusekwe kwispredishithi. Ngokuphinda uqwalasele indlela ejongene nokuzenzekelayo kweentlanganiso zesicwangciso kwiindawo zonxibelelwano zabathengi, iingcali zentengiso zinokuthi ukukhula kwezoshishino kutyalo-mali kwaye kubenze babe yinxalenye ebalulekileyo yeenkqubo zentengiso kunye neentengiso. Ukufunda ngakumbi ngendlela iJifflenow enokukunceda ngayo ukuba ulawule ngcono iintlanganiso kumnyhadala wakho olandelayo okanye kwiziko lakho lengcaciso, ndwendwela i-jifflenow.com.
tags: iqonga lokuthengisa inkomfaukuthengisa umcimbiiqonga lokuthengisa umsithoukuzenzekela ngokuzenzekelayoiqonga lokuthengisa kwinkomfa kwi-IntanethiIqonga lokuthengisa lewebhu
Yazi Yonke into, ke unokwenza nantoni na: Indlela i-6sense eyiphazamisa ngayo iMveliso ye-ABM